Shakhsiyaadka & Macluumaadka: Mike Baldassari | NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner iyo Soosaaraha NAB Show LIVE. Wararka Injineerka Warbaahinta
Bogga ugu weyn » Featured » Shakhsiyaadka & Astaamaha: Mike Baldassari
Shakhsiyaadka & Astaamaha: Mike Baldassari
Mike Baldassari (isha: Jonsar Studios)
Mike Baldassari waa naqshadeeye naareed caan ah oo aad loo ixtiraamo oo heer sare iyo filimba leh. Waxaan dhawaan helay fursad aan ku qaado waraysi faahfaahsan oo isaga ah oo ku saabsan waxyaabihiisa uu qabtay iyo dhibco badan.
"Waan ku faraxsanahay inaan iraahdo waxaan ahay Tony iyo Emmy-magacaabay naqshadeeye nalalka shaqadooda lagu arkay iyagoo ku nool in ka badan 25 dal," Mike ayaa ii sheegay. Intaa waxaa dheer in la qaabeeyo Broadway sida cabaret (1998 & 2014), Caruurta Eebbe Ka Yar, Iyo Taariikhda Koowaad, Filimaanta ayaan u abuuray iftiinka tiyaatarka Ghostbusters (Nooca 2016), Sagaal, Dhagaxii weynaa ee reer qarniyadii, Qaylo farxad leh, Iyo Bandhig Faneedka Neil Young, iyo kuwo kale. Naqshadeynta telefishankeyga waxaa ka mid ah xilli 2aad David Letterman Martigeyga Xiga Uma Baahan Hordhac, ka RED Live riwaayad / baahin ka socota Times Square oo leh U2 iyo Bruce Springsteen, U2's Dhagaxa sare waxqabadka Show Caawa The, dhacdooyinka Dokumentariko Hada!, iyo sidoo kale cajalado hore loogu talagalay Saturday Night Live iyo Night goor dambe la Seed Meyers. Waxaan ugu talagalay Netflix takhasusyada John Mulaney, Ray Romano, Joe Rogan, Dana Carvey, iyo takhasusyada soo socda ee Hannibal Buress iyo Chris D'Elia. Adduunyada muusigga, waxaan ugu tala galay Eves sannado badan oo cusub oo leh Phish at MSG, iyo tiro ka mid ah Tours Concert ee Neil Young iyo Alice ee silsilado. Intaa waxaa dheer, waxaan ugu talagay riwaayado telefishannada laga daawado; Mary J. Blige, Tim McGraw, Sam Smith, iyo Garth Brooks. ”
Baldassari wuxuu sii waday inuu ii sheego sida uu ku bilaabay bilawgiisa naqshadeeye nal. Intii aan dhiganayay dugsiga sare waxaan ku ciyaarayay koox kooxeed waxaanan si xirfad leh ugu shaqeynayay sidii durbaan garaac. Dugsiga Sare ee Parsippany Hills wuxuu lahaa barnaamij farshaxan aad u fiican, waxaanan ku dhammeeyay intii ugu macquulsanayd intii aan kari karayay inaan ka shaqeeyo tiyaatarka oo aan ku qabtay cilladaha laydhka. Waxaan sii watay waxbarashadaydii tiyaatarka ee Jaamacadda Connecticut, anigoo weli waayeel ah, waxaa layga aqbalay barnaamijka Farshaxanka Farshaxanka ah ee United 829. Intaa ka dib, waan baxay oo waan ordayay! Aniga ahaan, waxay ii ahayd horumar dabiici ah laga bilaabo muusikiiste ilaa nashqadeeyaha laydhka, maadaama aan wali maalin walba kudarsamo muusig. Waxaan fiirinayaa inaan ahay Naqshadeeye Laydh runtii waxaan ahay 'orchestrator,' marka laga reebo, halkii aan u isticmaali lahaa aaladaha muusikada sida violin ama guitaarka, waxaan u adeegsanayaa laydhadh soconaya iyo ilo kale si aan muuqaal ahaan ugu abaabulo muusigga ama khibradaha kale ee masraxa. "
Waxaan weydiiyay Mike wax ku saabsan soosaarka tiyaatarka iyo filimada uu si gaar ah u xasuusto ama uu si gaar ah ugu faano. Waxaan la lahaa 20-sano oo xiriir xiriir ah soosaarka Broadway ee cabaret, iyadoo loo magacaabay Peggy Eisenhauer abaalmarinta Tony sanadkii 1998. Kadib waxaan isla qaabeynay soo nooleyntii ugu dambeysay sanadkii 2014. Markii aan bilawnay, waxaa si wada jir ah u agaasimayay labadan dhalinyarada ah ee lagu kala magacaabo Sam Mendes iyo Rob Marshall. (Waxaan la yaabanahay wixii ku dhacay raggaas?) Waxaan ku dhammaannay inaan sameyno safarro badan iyo soo saarno adduunka oo dhan. Baahnayn in la dhaho, wax soo saarkeenu wuxuu ahaa mid ciyaarta bedela oo sii wadi doona inuu saameyn ku yeesho wax soo saar kasta oo soo socda oo waligiis la sameyn doono cabaret. Waxa kale ee ku saabsan lahaanshaha xiriir dheer oo noocan oo kale ah hal show waa inay ka caawiso taas Kaabaret—mid ka mid ah muusigyada waaweyn ee Mareykanka ee waligood, sidaa darteed safarka dhab ahaantii waligiis caajis kuma noqon.
“Filimada, shaki la’aan, waa inaan dhigaa soosaarka Rob Marshall Sagaal xaq u halkaas! Waxaan shiday 14 lambarrada muusikada ee filimka ku jira, aniga oo si toos ah ula shaqeynaya sawir qaade Dion Beebe iyo Rob, halkaas oo seddexdeenaba aan si dhow uga wada shaqeynay muuqaalka daqiiqad kasta. Dhammaan lambarrada muusikada waxaa lagu toogtay masraxa ugu weyn ee codka ee Shepperton Studios oo ku yaal London, halkaas oo setku ahaa qiyaastii garoon kubbadda cagta ah. Waa filim muuqaal muuqaal ah oo qurux badan leh, waxaana hogaaminaya Daniel Day Lewis oo ay wada jilayaan Sophia Loren, Dame Judy Dench, Nicole Kidman, Penelope Cruise, Fergie, Kate Hudson, iyo Marion Cotillard. Marka lagu daro iftiiminta taxane muusig oo aad u waaweyn, mid kasta oo ka mid ah hoggaamiyeyaasha sidoo kale waxay lahaayeen tirooyin u gaar ah oo muuqaal ah. Asal ahaan lambar kasta oo muusig waa in loo shido qaab masraxiyadeed aad u fara badan, waana sababta uu Rob ii keenay. Wuxuu doonayey naqshadeeye u iftiimin kara filimka sidii aan u dhigeyno masraxa Broadway oo kale, wuuna ogaa inaan ku hadalno isku luqad ah. Waxay ahayd waayo-aragnimo lama iloobaan ah! ”
Dhibcaha Baldassari sidoo kale waxaa ka mid ah sameynta barnaamijyo shirkadeed oo loogu talagalay Telefishanka CBS. Wuxuu ii sharaxay sida uu ku helay gig-gaas. “Soo saaraha fulinta ee CBS Hore arkay cabaret oo ay gaareen markii ay isku dayayeen inay kor u qaadaan qiimaha wax soo saarkooda. Waqti ka dib, bandhigyadu waxay noqdeen kuwo sii kordhaya oo runtii waxaan riixnay xadka waxa lagu sameyn karo Carnegie Hall. Mid ka mid ah caqabadaha ugu waa weyn ee aan marwalba kala kulanno mashruucan ayaa ka dhigeysa showga mid u muuqda dadka weyn ee Madison Avenue ee qolka ku jira, iyo sidoo kale kaamirada, maaddaama bandhigga laga sii daayo meelaha kale ee Mareykanka. Si loo gaaro isku dheelitirka nalalka saxda ah ee tooska ah iyo kamaradda, waxaan si aad ah ula shaqeeyaa injineerka fiidiyowga Billy Steinberg. Qoob ka ciyaarka aan sameyno wuxuu xaqiijinayaa in uusan jirin wax tanaasul ah oo muuqaal ah oo ku saabsan labada dhagaystayaal ah. ”
Aniga oo ka jawaabaya su'aashayda ku saabsan nooca qalabka nalalka iyo softiweerka uu doorbidayo in uu la shaqeeyo, Baldassari wuxuu yidhi, "Dhinaca softiweerka, aaladda ugu weyn ee loo tago waa Vectorworks ee dhamaan sawiradeena iyo soo bandhigida 3D. Waraaqaha u dhigma ee u dhexeeya naqshadeeyaha iyo gaffer-ka, had iyo jeer waa Lightwright, oo aan isticmaali jiray tan iyo markii ay soo baxday intii aan ku jiray kulliyadda. Labada barnaamij hadda waxay ku shaqeeyaan tandem quruxsan muuqaal la'aan. Maaddaama qaybta 3D ee Vectorworks ay sii wadayso inay horumariso illaa heer ay hadda aad u qiimo badan tahay iyadoo qayb ka ah geeddi-socodka naqshadeynta horay loo soo saaray, qaybteeda ka-fiirsashada ee Vision ayaa hadda sii kordheysa oo qayb ka noqonaysa shaqadeena. Asal ahaan si fudud ayaan uga guuri karnaa abuurista qorshaheena iftiinka iyo sawirada farsamada, 3D oo qayb ka ah Vectorworks, ka dibna u dhoofino faylka CAD-da 'Vision', halkaas oo aan ka bilaabi karno inaan si toos ah ugu dhisno tilmaamaha qunsulka nalka oo aan bilowno inaan la imaanno aragtida hal abuurka ah Naqshadeynta iftiinka nolosha.
“Guud ahaan dhanka qalabka, waxaan sii wadaa inaan aad iyo aad ugu sii socdo dhanka ilaha LED-ka iyo qalabka iswada, kuwaas oo si isa soo taraysa u noqonaya mid isku mid ah. Waxaan marwalba doorbidaa inaan yeesho awooda midab bedelida iyo waliba ikhtiyaarka aan ku hagaajin karo diirada qalabka iyadoo loo marayo barnaamijiye halkii aan ka mari lahaa jaranjarada. Waxaan u maleynayaa in farshaxan ahaan ay muhiim tahay in la sii wado qeexida aalado tamarta ku habboon isla markaana loo riixo soo saarayaasha dhanka alaabada cagaaran. Heerka isbeddelka ayaa sii soconaya si dhakhso leh laakiin tani waa waqti xiiso leh, maadaama soosaarayaasha ay kaga jawaabayeen qalab ka wanaagsan kana wanaagsan sanadihii la soo dhaafay. Guud ahaan, waxaan dhihi lahaa tayada qalabka ku saleysan LED-ka ayaa sii wanaajinaya.
Markii aan sameeyo mashruucyo aad u ballaadhan, qalabka aan tilmaamo ayaa si isku mid ah u kala duwanaan kara, maaddaama aysan jirin wax hal-ku-habboon-oo dhan oo xal u ah caqabadaha nalalka badankood. Si kastaba ha noqotee, waan ogahay markasta oo laygu yeero, dheh, a Night goor dambe la Seed Meyers duub hore loo duubay, oo inta badan aan ahayn, xirmada waxay ka bilaabaneysaa Arri Skypanels. Haddii aan shidayo Netflix gaar ah sida David Letterman's Ujeeddadayda Martida Soo socota taas oo ay kujirto gadaal gadaal loo isticmaalo sida baaskiil, waxaan u maleynayaa inaan ku bilaabayo iskuxirka wareega ee Chroma-Q Color Force II. Dhinaca kontoroolka, marwalba waan la tashan doonaa Barnaamijkayga Light Moving, laakiin waxaan inta badan u muuqannaa inaan degno meel ETC Eco-system ama nooc ka mid ah GrandMA 2. Inkastoo aysan gabi ahaanba ku habboonayn mashruuc kasta, guud ahaan otomaatiga badan ayaa ka sii fiican. ”
Baldassari wuxuu u qabtay aqoon isweydaarsi NAB Show New York dhamaadkii usbuucii la soo dhaafay ayaa loo yaqaan "The LED Challenge for Film and Television," sidaa darteed waxaan ku soo qaadanay wareysiga. "Tani waxay ahayd markii ugu horreysay ee la igu casuumo inaan qayb ka noqdo NAB," ayuu sharraxay. Tan iyo markii aan ka bilaabay warshadaha marwalba waan maqli jiray, inta badanna farsamayaqaano si wanaagsan loo ixtiraamo, sidaa darteed waxaan rajeynayaa inaan laftirkeyga la kulmo!
Markii aan ku soo dhowaanayay hadalkayga aragtida naqshadeeyaha, waxaan si kooban u taabtay sida iyo sababta aan ku gaarnay heerka LED-yada ay anfacayaan anaga kaliya ma ahan tiyaatarka iyo booqashada dhagaxa, laakiin telefishanka iyo filimka. Aniga oo ah mid ka mid ah naqshadeeyayaasha nalka 'iskutallaabta' ee ka shaqeeya dhammaan warshadahaas, waxaan la socday joogitaanka sii kordheysa ee LED-yada in muddo ah hadda. Waxaa jira faa'iidooyinka muuqda ee isticmaalka LEDs-ka inay taabtaan; Isticmaalka awoodda, dabacsanaanta, iwm, laakiin waxaan doonayay inaan sidoo kale wax ka taabto qaar ka mid ah caqabadihii soo maray. Waxaan la wadaagay sheekooyin sheeko xambaarsan oo ku saabsan dhibaatooyinka soo kordhay, iyo wixii aan ku xallinay. Qeybta ugu hooseysa ayaa ah, qalabka LED-ka ayaa halkaan lagu sii joogayaa-in kasta oo soo saarayaasha qaar ay isla garteen, wali waxaa jira xaalado aan u baahanahay inaan uga jawaab celino caqabadaha soo raaci kara iyadoo la adeegsanayo qalab leh afar xarig oo dusha ka saaran! Dhagaystayaashayda bartilmaameedka waxay ahayd qofkasta oo suulasha ku dhex ridaya barkada LED-ka, halyeeyo waaya arag ah oo raba inay xal maskaxda ku hayaan markay arin ka taagan tahay mashruucooda. ”
Baldassari ayaa wareysiga ku soo gabagabeeyay isagoo iiga sheekeeyay mashaariicdiisa soo socda. “Waqtigaan la joogo, waxaan heystaa barnaamij gaar ah oo Netflix ah oo loogu talagalay Hannibel Buress oo ku dhex jira daasaddii aan xagaagii la soo dhaafay ku dilnay magaalada Miami, waxaanan hadda qorsheynayaa mid kale oo Netflix gaar ah oo loogu talagalay Chris D'Elia oo aan ku toogneyno Minneapolis horraantii Nofeembar. Waxaa jira mashruuc filim ah oo saaxiibkay choreographer uu iga codsaday inaan iftiimiyo oo wareegaya. Dhinaca masraxa, waxaan ahay nalka iyo soosaaraha naqshadeynta taxane Broadway la yiraahdo Deganaanshaha, taas oo aan rajeyneyno inaan soo celinno guga soo socda. Waa bandhig nooca-iida ah oo ka socda Broadway halkaas oo aan ku soo qaadan karno farshaxanno fara badan oo kala duwan oo orod kooban ah. Noocii ugu horreeyay xagaagan lasoo dhaafay wuxuu ahaa mid si heer sare ah loogu guuleystay. Waxaan leenahay fanaaniin kala duwan sida Morrissey, Mel Brooks, Dave Chappelle, iyo Barry Manilow. Furaha sameynta taxanaha ayaa ah nidaam nal oo aan ugu magac darnay 'Flex-i-Fest' ™ halkaas oo, la shaqeynta ficil kasta oo LD ah, waxaan awoodnay inaan siinno farshaxanle kasta tooda gaarka ah, nalka khaaska ah ee u gaarka ah adigoon wax xamuul ah gelin rar-baxay bandhigyo gebi ahaanba kala duwan. Beddelkii ugu dambeeyay ee aan sameynay, nidaamka nalalka wuxuu ka yimid Dave Chappelle qorshihiisa nalka gaarka ah iyo Barry Manilow's wax ka yar labo saacadood. Si fiican ayey u shaqeysay in PRG iyo shirkadaydu ay xareeyeen patent-ka. Ka raadi guga soo socda tiyaatar kale oo Broadway ah! Intaas ka dib, waxaa jira labo safar oo masraxa ah oo la filayo inay baxaan xilli ciyaareedka soo socda. ”
2016 NAB Show 2016 NAB Show Job Fair 2016 NAB Show News Broadcast Awards Beat Broadcast Beat Magazine Broadcast Engineer Broadcast Engineering Idaacadan Convention Broadcasting Convention NAB 2015 NAB 2016 NAB Show NAB Show 2016 xirfadaha show NAB NAB Show Las Vegas NAB Show Diiwaangelinta NAB16 nabshow National Association of warbaahinta Show Post Production Adduunka 2019-10-18
Previous: Dell buluuga ah waxay abuurtaa muuqaal muuqaal ah "Waxkastoo tirinaya" Spot for Alienware
Next: Muuqaalka Warbaahinta wuxuu bixiyaa eSports Giant ESL leh Xalka Gaadiidka Fiidiyowga